इनरुवा अस्पतालको लागत प्रदेशले झिकायो | जनदिशा
इनरुवा अस्पतालको लागत प्रदेशले झिकायो
इनरुवा । आर्थिक अनियमितता लगायतका विषयमा समाचार सार्वजनिक भएसँगै छानविनका लागि इनरुवा अस्पताल पुगेको प्रदेश मन्त्रालयको टोलीले लागत विवरण संकलन गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर एकको सामाजिक बिकास मन्त्रालयको टोलीले आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै इनरुवा अस्पतालको चल अचल सम्पत्ति देखि लिएर कर्मचारी विवरण, जिन्सी तथा स्टोर फाँट, रकम घोटाला प्रकरणसँग सम्वन्धित तथ्याङ्कीय विवरण लगायत सम्पादित कार्य विवरणको जानकारी लिएको छ ।
सामाजिक बिकास मन्त्रालयका तथ्याङक सहायक मुकुन्द दाहालले संचारमाध्यम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त सुचनाका आधारमा अस्पतालको कागजात केलाउने काम भैरहेको बताए ।
केही दिन भित्रमा आवश्यक राय सहितको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाइने दाहालले बताए । करारमा रहेका कर्मचारीले रकम घोटाला गरेको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरी र त्यसपश्चातको प्रकृयाका बारेमा समेत मन्त्रालयको टोली जानकारी माग गरेको बुझिएको छ ।
इनरुवा अस्पतालकी मेसु डा. बिना शाक्यले मन्त्रालयको टोलीले आवश्यक छानविनकालागि समग्र अवस्थाबारेको लिखित जानकारी संकलन गरेर लगेको बताए ।
अस्पतालमा भैआको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खिचातानी र कर्मचारीको मनपरीतन्त्र लगायतका विषयमा समेत टोली समक्ष जानकारी गराइएको शाक्यले जानकारी दिए ।
अस्पताल स्रोतका आधारमा तीन पटक अस्पतालमा धाएर मन्त्रालयको टोलीले कागाजात केलाउँदै आवश्यकता अनुरुपको विवरण र थप कागजपत्र झिकाएर लगेको छ ।
स्रोतका अनुसार छानविन पश्चातको प्रतिवेदनमा रकम हिनामिनामा संलग्नहरुको करारको जागिर चट हुने प्रवल सम्भावना देखिएको छ ।
मन्त्रालय अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र पाउँदै आएको सरकारी अनुदानको उचित सदुपयोग भए नभएको बारेमा समेत गहन अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।
विस्तृत विवरण प्रतिवेदनले बोल्ने भएकाले तत्काल छानविनको विषय र कार्वाही प्रकृया लगायतको बारेमा बोल्न नमिल्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका तथ्याङक सहायक दाहालले बताए ।
इनरुवा अस्पताल लामो सयमयता विभिन्न मुद्दामा विवादित बन्दै आएको छ । करारका कर्मचारीले सरकारी रकम आफुखुशी चलाएको, राजनैतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिएको तथा स्थानीय तहले दबदबा कायम गर्न खोजेको जस्ता विषय पछिल्लो पटक चर्चासँगै आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ ।
Previous Previous post: घर फर्किन पाएनन् ५० हजार चेली !
Next Next post: विभिन्न बहानामा भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा दुई सय महिला तथा बालबालिको उद्धार